Dlala kunye noogxa bakho kwihlabathi elitsha lamaNqaku, iMMO ephathekayo | I-Androidsis
Kusekude ekuboneni umjikelo opheleleyo weMMORPGs okwenyani kwi-Android. Okwangoku, ngaphandle kokumbalwa okumbalwa, kufuneka sanelise izihloko ezinje nge World of Legends, iMMORPG entsha ekhoyo kwifomathi ye-beta esuka kuGoogle Play.
En World of Legends kuya kufuneka uphonononge ilizwe elimnandi likaElysia kwaye ke ngaloo ndlela ufumanise zonke izinto ezimangazayo kunye neziya zikulindele. Isihloko esihle kakhulu kwicandelo lobuchwephesha kwaye siyakuvumela ukuba wenze lonke iqela leenkuku ukukunceda kuhambo lwakho kwihlabathi le-Elysia.
1 IMMORPG encinci
2 Ilizwe leentsomi kwi-Intanethi
3 Phuhlisa iqhawe lakho ngokufanelekileyo
Ukuba sithi kufuneka sanelisekile zizihloko ezinje ngeHlabathi leentsomi, kufuneka ukuya kuthi ga ngoku ziinguqulelo ezingaphantsi kweMMORPGBadala njenge Ultima kwi-Intanethi, iWorld Warcraft okanye i-Evercraft 2. Kuyinyani ukuba ixesha elininzi lidlulile kwaye kwii-PC nakwii-consoles sineMMORPGs ezintsha, kodwa zikwiselfowuni yethu apho silinde khona ukuba enye ifike uyibetha ngenene itafile.
Asinakho ukungahoyi Ubusuku obungaze bubusika be-Android okanye ukubaleka kakhulu esandula ukufika kwi-OS yethu ethandekayo yezixhobo eziphathwayo. Ihlabathi leMbali lifumana kwakhona umzobo kwikhathuni ukusisa kwisihloko esiya kuthi sinyanzele kuqala ukuba siye kufundiso apho kufanelekileyo ukuba sicinezele "ukwamkela" ngalo lonke ixesha.
Bekungayi kuba kubi ukuba bebemfutshane kwaye abayi kusinyanzela ukuba sichithe imizuzu emininzi njengababukeli nje, okanye ubuncinci siphucule uluncedo lokwenyani lwesifundo. Umhlaba weentsomi ubonakaliswa lihlabathi elivulekileyo apho uya kuba nakho ukubona abanye abadlali besondela kwimisitho kunye nalawo milo; nangona oku kungenziwa ngexesha lokwenyani, kodwa singena kwigumbi apho siza kudlala sedwa.
Ilizwe leentsomi kwi-Intanethi
Kungenxa yoko le nto amaxesha amaninzi sihamba ngokuchaza isihloko esinjengeMMORPG, kuba isenzo sidlula kumagumbi, endaweni yokuba sikwazi ukubona abadlali besilwa njengoko kusenzeka ngeeMMORPGs zokwenyani. Yeyiphi ewe siza kubona abadlali kwimephu ephambili, kodwa nilibale ngokubabona kwezinye iindawo, ngaphandle kokuba badlala nani ngokwamaqela.
Masithi umlo ubandakanya ukusondela kwindawo ekuthunyelwa kuyo ukuze lo mzekelo ukhankanyiweyo uyavulwa. Ewe kuya kubakho umlo oya kuthi, nangona uzenzekelayo ubukhulu becala, usivumele ukuba sihambise iqhawe lethu ukuthintela uhlaselo olunamandla lotshaba okanye sisebenzise ezo zakhono zikhethekileyo ukuphelisa abo baphosa umlingo kude.
Kwimidlalo ye-Intanethi yale ndlela, ukukwazi ube nakho ukudala imindeni kunye nabahlobo kwaye ke ngaloo ndlela siya kuvula imbuyekezo eyodwa njengoko sigqiba kwimishini ekhethekileyo. Nangona siye sagxeka ukuba ayiyonyani iMMORPG, uya kuba nemvakalelo yokudlala nabantu abaninzi. Ingakumbi ukuba uyila indlu.
Phuhlisa iqhawe lakho ngokufanelekileyo
Kwaye njengeMMORPG ekucingelwa ukuba akuyomfuneko ukuba uphucule umlinganiswa ophambili njengabo bonke abo bantu ungabongeza kumanqanaba ahlukeneyo. Kubalulekile ukuba kumdlalo wolu hlobo sinakho yenza iqhawe lethu ngokwezifiso, yixhobise ngezixhobo ezingcono kunye nezixhobo kwaye ube nethuba lokufumana izinto ezizodwa. Kukho ukuphanga, ewe.
Ngokobuchwephesha kwiLizwe leMbali ngumdlalo egcinwe kakuhle kwaye, nangona ikwi-beta epapashwe kwiVenkile yokuDlala kuGoogle, ineenkcukacha zayo. Uhlobo lwayo lwegraphic ikhathuni kwaye inemibala kuyo yonke. Kwaye ayiphoswa ziziphumo ezithile zoomabophe esizisebenzisayo kunye noyilo lwabalinganiswa kunye nehlabathi elinakekelwe kakuhle.
World of Legends yiMMORPG entsha yeselfowuni ukuba, nangona kukude ekubeni ngomnye wee-greats, unako ukwanelisa isiseko esikhulu somdlali. Unayo yasimahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle ukuze ukwazi ukuyila indlu kunye noogxa bakho.
Uhlobo oluhle lwekhathuni
Ayililo ilizwe elivulekileyo ngokwenene
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » World of Legends yiMMORPG entsha ekufuneka uyilumkele